10 'x 20' Modular Mahhala Standing ekhanyisa ngemuva Isentha Umi - China 10 'x 20' Modular Mahhala Standing ekhanyisa ngemuva Isentha Umi Supplier, Factory -CL Bukisa
10 'x 20' Modular Mahhala Standing ekhanyisa ngemuva Isentha imele
• Ubukhulu bokubonisa: 10 'x 20'
• Izinto: aluminium extrusion, indwangu njll.
• Umbala: isiliva, omnyama noma isiko.
• LED: onqenqemeni-ovuthayo strip kwaholela abantu abayizigidi, 5000-10000 isikhathi amahora ukuphila.
• Setha i-Time: 2 abantu 40 amaminithi
• Isicelo: umbukiso wezohwebo / umbukiso / ukubonisa njll.
• I-Voltage: Ukufaka i-100-240v; Okukhipha DC 12v / 24v
• Ukunyatheliswa kwezithombe: Ukushicilelwa kokudayiswa kwedayi
Ukupakisha: icala lokushayela noma icala lezinkuni
Material I-aluminium extrusion, indwangu, iholele umgqeni njll.
Usayizi I-10ft, i-20ft, noma usayizi we-cistomized
Ububanzi besakhiwo 120mm / 160mm / 180mm
surface Ukwelashwa I-Anodized (evamile), nezinye izinto zobuciko ezitholakalayo.
Isiliva, omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka noma elenziwe ngezifiso
Uhlobo Ngesandla esisodwa noma eseceleni kabili
SEG ozimele ziphezulu ezibukwayo umthelela ubonisa ukuthi kukhona Modular futhi kungenziwa egcizelele ukuze uvumelane nezidingo zakho. Lokhu Bukisa indlela ehlukile ingenye enemisebenzi kakhulu futhi ngezifiso izinhlelo Modular emakethe.
Khanyisa umkhiqizo wakho ngemisindo yokubuyiselwa emuva kwe-freestanding backlit! Usebenzisa i-high-resolution icwecwe lesikhumba ne-LED izibani ngaphakathi, ukunakwa kwanda ngokucacile ngaphandle, okwenza kube lula ukuveza imikhiqizo yakho nezinsizakalo emhlanganweni, emincintiswaneni, nakweminye imicimbi!